Ariaramnesy - Wikipedia
I Ariaramnesy dia mpanjaka iraniana, isan'ny Akemenida, izay rahalahin'i Kirosy I sy zanak'i Teispesy. Mety razamben'i Dariosy I koa izy araka ny sora-tsokitr'i Behistona sasy nanapaka tamin'ny tanin'i Parsomasa nandritra ny fanapahan'ny rahalahiny Kirosy I tao Ansàna.
Avy amin'ny teny grika hoe Ἀριαράμνης. / Ariaramnês io anarana nogasina io, izay atao hoe آریارمن. amin'ny teny persana. Atao hoe Ariyāramna izy amin'ny teny persana taloha, izay midika hoe "izay mitondra fandriampahalemana ho an'ny Ariana" (ny Ariana dia ny Iraniana).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ariaramnesy&oldid=978916"
Dernière modification le 30 Desambra 2019, à 10:49
Voaova farany tamin'ny 30 Desambra 2019 amin'ny 10:49 ity pejy ity.